Etu esi enweta mmiri mmiri site na mmiri na iru mmiri na ihu igwe akọrọ | Network Meteorology
Etu esi enweta mmiri mmiri site na Fog na iru mmiri na ihu igwe
N’ụwa ebe ọzara na-aga n’ihu, nyocha maka azịza na-aga n’ihu na-akpali ọtụtụ ụzọ iji gbochie ụkọ mmiri. Agbanyeghị na blọọgụ anyị kwurịtara ọtụtụ oge maka azịza ụkọ mmiri ozuzo, ma ọ bụ nsogbu nke metụtara, n'oge a anyị ga-ekwu maka ikuku. Kedu ka usoro si weghara ya ma gbanwee ya n'ime mmiri.
Tupu ịmalite, buru n'uche nke ahụ ọ bụghị mmiri "okike" usoro. N'ezie a na-ewere mmiri dị ugbu a, na microdrops, mana a na-ewere ya. Nke ahụ pụtara kama ịmepụta, usoro a nwere uru nke redirecting ojiji, maka mmiri na oriri. N'ezie ọ bụ ụzọ magburu onwe ya maka oge ahụ enwere ike ịnwe ikuku, mana enwere ụkọ mmiri, ogbugba mmiri n'ubi anaghị akwụsị. Obere nnukwu mmiri. Anyị na-akọwa ihe n'okpuru.
1 The alụlụụ na-ejide. Panels na ọnyà mmiri
3 Mmezi ya? Nke kacha mma. Ihe efu
The alụlụụ na-ejide. Panels na ọnyà mmiri
A na-echekwa ogwe ma ọ bụ ihe ngebichi nke anwụrụ ọkụ iji kpokọta mmiri ma ọ bụ alụlụ. Ebumnuche ya bụ iji mezuo mmiri mmiri, ruo mgbe ha zuru oke, ya bụ, gbanwee ha ka ha tụlee. Echiche a mụrụ dị ka ihe ngwọta na mpaghara ebe enweghị mmiri mmiri a bara uru kachasị mkpa. N'ezie, ha nwere ike ịrụ ọrụ na mpaghara ọ bụla, n’ihi na ọbụna n’ime ọzara n’abalị ka iru mmiri dị. Ihe ọzọ bụ, na mbido ya bụ nnukwu ọkpụrụkpụ, nke ahụ ga-adabere na iru mmiri ma ọ bụ foogu nke mpaghara ahụ doro anya.
Theyzọ ha si arụ ọrụ dị mfe. Ka obere mmiri na-edobe na enyo, ha na-etinye uche iji mepụta ụmụ irighiri mmiri ka ukwuu. Mmiri ndị a, site na ịdị arọ ha na njedebe na-adaba na ike ndọda. Na ala enwere onye nchịkọta maka mmiri a na-ada ada, nke a na-eduzi n'akụkụ achọrọ. O nwere ike ibu ozugbo na osisi, ma obu ihe ndi na echekwa mmiri.
A na-eji Panesh Trap Panels eme ihe n'ụzọ zuru oke nke enwere ike dọnye ya naanị n'ọnụ pensụl. Enwere ụdị dị iche iche, mana dịka ọmụmaatụ, otu n'ime ọnụ ala dị ala karịa ma enwere ọtụtụ ihe bụ plastik. Maka ndị a, dịka ọmụmaatụ, dayameta nke oghere ndị ahụ nke alụlụ ma ọ bụ iru mmiri "na-amị" buru ibu. O nwere ike ime ka njigide njigide na-efu ụfọdụ, mana ọ gaghị efufu ojiji ya. Igwe nke ọ bụla dị na square mita nwere ikike inweta mmiri lita 4 ruo 15 kwa abalị!
Echiche ya bụ idowe ha na mkpọda ugwu, ma ọ bụ ebe ikuku kacha efe. Ha na-esikarị na 300 ruo 800 mita karịa elu oke osimiri. Mana dịka anyị kwuworo, ha nwere ike ịnọ ebe ọ bụla.
A gharịrị iburu n'uche, dịka ọmụmaatụ, igwe anaghị enwe otu ịdị ọcha n'ebe niile, mmiri nwere ike imetọ. Dabere na mpaghara ahụ, enwere ike ịchekwa ya na igbe ma ọ bụrụ na ojiji ya ga-abawanye ma emechaa ka ọ ghara imetọ ya. Ọzọkwa, ọ bụrụ na mmiri enweghị ike ịdị oke mma maka oriri ọbụlagodi mgbe echekwara ya, nchịkọta ụbọchị nwere ike ịgbaso nzacha. Ma ejiri owu, quartz ájá, gravel, coal, chlorination, wdg.
Mmezi ya? Nke kacha mma. Ihe efu
N'ihi eziokwu ahụ bụ na nrụnye ya dị mfe ma ọ chọghị ọtụtụ ngwaọrụ, mmezi ya dị mfe. N'agbanyeghị nke ahụ, ụfọdụ obere nsogbu nwere ike ibilite, dịka nkwụsị na ọkpọkọ. Dabere na ihe ahụ, ọ ga-adịrịrị mfe ịgbanwe ha, ma ọ bụ ha nwere ike idozi ya site na ịka akara ma ọ bụrụ na ọ naghị adị oke. Enwere ike ịmechaa ma ọ bụ anya mmiri na akwa. Ọtụtụ mgbe, enwere ike idozi ya ngwa ngwa site na agịga na eri.
Ihe kachasị njọ anyị nwere ike ịchọta ịbụ nnukwu na ihu igwe na-acha ọkụ ọkụ ma ọ bụ nke ajọ ifufe na-ebibi ha. N'ọnọdụ ahụ, mgbochi dị mma karịa ọgwụgwọ, na ịtụ anya ifufe, na-ewepụ n'oge. Ihe ọzọ nwere ike ịbụ obere òké, ma ọ bụ anụmanụ ndị akpịrị na-akpọ nkụ ndị dị nso. A ghaghị iburu n'uche na ọ bụrụ na akpa ahụ ekpughere ọtụtụ mmiri, a ga-edozi nsogbu ndị a.
Ọtụtụ mgbe, anwụ ngwa ngwa nke meshes na-abụkarị ihe dịka afọ 5. Ọ bụrụ na anyị emee obere mgbakọ na mwepụ, nke ọ bụla n’ime anyị nwere ike inye anyị ọtụtụ tọn mmiri mmiri n’oge niile ọ na-arụ ọrụ. Nnukwu usoro iji luso ụkọ mmiri ọgụ, nke kwesịrị post blọgụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe » Etu esi enweta mmiri mmiri site na Fog na iru mmiri na ihu igwe
Ọ bụ ụzọ dị mma maka Bajacalifornia na Sonora na Mexico
Zaghachi Guadalupe Delgado
Anyị enwere ike ịbanye n'ime afọ dị ọkụ karị?